प्रधानमन्त्री ओलीको सपना चकनाचुर, अव के हुन्छ ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
प्रधानमन्त्री ओलीको सपना चकनाचुर, अव के हुन्छ ?
काठमाडौं – मदेशबादी दलहरुलाई फुटाउन जोड बल गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तत फुटाउन असफल भएका छन । निर्वाचन आयोजमा एकिकरणपछि बनेको ‘जनता समाजवादी पार्टी’ दर्ता भएपछि ओलीको सपना चकनाचुर भएको छ ।
समाजबादी पार्टी फुटाउन सांसदको अप हरण समेत गरेको आरोप लागेको छ ।
पार्टी फुटाउन लागेको सूचना पाउने वित्तिकै समाजबादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीाबीचमा रातारात एकता भएपछि फुटाएर राजनीति गर्ने खोज्ने ओलीको सपना चकनाचुर भएको छ ।
बिहीबार बिहान दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेका नेता राजेन्द्र महतोले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अहिले कोरोना भाइरसबाट जीवन रक्षा गर्ने काम प्राथमिकतामा परेकाले एकताको बाँकी काम पछि गर्ने गरि सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘पहिले जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्‍यो । लकडाउनपछि एकताको बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्छौं ।’
उनले समाजवादी र राजपाबीच सम्मानजनक एकता भएको दाबी गरे । बुधबार राति समाजवादी र राजपाबीच पार्टी एकता भएको थियो । नेताहरुको पद बाँडफाँट गरिएको छैन । एकतापछि पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ राखिएको छ भने झण्डा समाजवादीको र चुनावचिह्न राजपाको प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
यो एकताबाट पार्टीका कतिपय नेताहरु असन्तुष्ट रहेको र उनीहरुले पार्टी फुटाउने चर्चा चलिरहेको बेला नेता महतोले भने पार्टी नफुट्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘फुट्ने सुट्ने कुरा छैन, सबै मिलिहाल्छ। हेरिहाल्नु भयो। समाजवादी फुट्ने भनेपछि जुटेर देखाइदियौँ। समाजवादी र राजपा फुटको सम्भावना छैन। सबै मिलिहाल्छ, छ जना मिलायौँ। सात लाइ पनि मिलायौँ, लकडाउन पछि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ।’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ, तयार भएर बस्नुस्
प्रधानमन्त्रीले भने- मेलम्चीको पानी यसै वर्षभित्र काठमाडौं आउँछ